I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguOlivia
Kutshanje kulungiswe igumbi lokulala eli-1 lokuhlambela eli-1 elihlala kumgama nje ukusuka kuMlambo iGreenbrier kunye neGreenbrier River Trail. Iikhilomitha ezingama-21 ukusuka kwi-Snowshoe Mountain Ski Resort. Le ndlu ilungele iindwendwe ezi-4. Nangona ihlala ibhloko kude nomlambo, iindwendwe zisenokonwabela iimbono ezintle zomlambo. Yiza ukonwabele yonke into ephantsi kwedolophu iMarlinton ekufuneka ibonelele ikakhulu kumgama wokuhamba.
I-Snowshoe Mountain Resort yimizuzu engama-30 nje ukusuka kwindawo yethu.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iilinen zebhedi, izindlu zangasese zibonelelwe. WIFI/TV (Netflix). Qinisekisa ukuba uqaphele ikhowudi engundoqo njengoko ingezizo zonke iinkonzo zeselfowuni ezikhoyo kwindawo. Asiyondawo ekwabelwana ngayo le.
Uyathanda ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukukhwela iityhubhu, ukutyibilika ekhephini, okanye ukukhwela ikhephu? I-Snowshoe Mountain Ski Resort ikumgama oziikhilomitha ezingama-27 kuphela.
Ukonwabele ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukukhwela intaba? Ngebhayisekile nje ezimbini zebhloko okanye uhambe ukusuka "kwiLoft" kukho ukufikelela ngokupheleleyo kwi-77-mile yeGreenbrier River Trail ehamba ecaleni koMlambo iGreenbrier.
ILoft ikwakumgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela, umzekelo, iGreenbrier Grille, apho wena nosapho okanye abahlobo bakho ninokuthimba ukutya ukuze nitye emlanjeni. Kwakhona, kukho ikofu ecocekileyo & nevenkile yebhayisekile, iDirt Bean, kanye ezantsi kwebhloko kuthi.
Ukuba uceba ukubhukisha nathi ungalibali ukujonga ngePocahontas County kaThixo inkqubo yendawo Parks & zoLonwabo, ngokunjalo, iziko undwendwe lwethu lendawo ukubona iziganeko ezizayo ezenzeka kwindawo!
Zininzi ezinye izinto ezinomtsalane kubakhenkethi ekufuneka idolophu ibonelele kuyo apho le ndlu ibekwe entliziyweni yabo bonke.
Ezinye izinto ezinomtsalane :
IiNgxangxasi ze-Hills Creek
Umzila kaloliwe weCass Scenic
I-NRAO - Indawo yokuQaphela iRadio Astronomy
Highland Scenic Highway (intle ekwindla xa amagqabi eqala ukutshintsha)
Umbuki zindwendwe ngu- Olivia
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka. Sihlala kufutshane kwaye siyafumaneka kuyo nayiphi na kwaye zonke iindwendwe zidinga ngexesha lokuhlala kwazo. Nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi malunga nayo nayiphi na imiba / iinkxalabo onokuba nazo!
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka. Sihlala kufutshane kwaye siyafumaneka kuyo nayiphi na kwaye zonke iindwendwe zidinga ngexesha lokuhlala…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marlinton